Akụkọ Akpado "nddị" - ULLER
Otu edemede niile Entretenimiento Ndị mmadụ Ihe omuma na ihe omuma Ụdị Njem na Ebe
Anyị ga-adị njikere mgbe niile n'ụzọ kachasị mma. Ikpuchido anya anyi na anya anyi di nkpa, ebe anyi aghaghi imeghari ka onodu ubochi di n’elu ebe ahu. Choputa ugogbe enyo anyi nwere anya anya anya!
You maraworị nchịkọta ọhụrụ nke ihe nkpuchi skai "Mgbidi"? Echefula ya! Na ejiji ejiji Uller® adịghị anọkarị n'azụ. Ndị otu anyị na ndị okike nwere mmasị na freeride, egwuregwu ugwu na ezigbo njem, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji weta usoro kachasị ọhụrụ na skki.
Agbanyeghi na afọ 2020 a adabaghị adaba, site na Uller® anyị chọrọ ịga n'ihu na-enye ndị freeriders na ndị na-eme egwuregwu onyinye kacha mma enwere ike ka ahụmịhe egwuregwu ahụ na-adịkarị mma, ihe ọ bụla mere. Anyị ga-agwa gị nke bụ ọkacha mmasị anyị maka ngwaahịa maka ndị freeriders anyị!
O doro anya na anyị niile na-ekwu ya n'olu dara ụda: FUCK 2020! Ezigbo afọ ... anyị ghọtara na afọ a siri ike nghọta, siri ike ịkọwa yana ọ siri ike imeri, ... MA Ọ B IMGH IM IMB IMRS. Anyị kwenyesiri ike na ọ dịghị ihe na-agaghị ekwe omume nye ndị freeriders n'obi, maka ezi ndị hụrụ snow n'anya, maka ndị a dọrọ ọzụzụ na njem ...
Ọ ga-abụrịrị onyinye kacha mma! Ugogbe anya maka anwụ nke kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ma na-emegharị n'ụzọ zuru oke na ọdịdị ihu iji nwee ike iwe iwe nke ịdọ aka ná ntị egwuregwu chọrọ. Họrọ ụdị agba na ụdị dị iche iche Ngwa ndị eji achọ ọrụ!
Site na Uller® anyị kere nkpuchi snow maka ịgba ọsọ na ịkwọ ụgbọ mmiri site na maka freeriders. Anyị maara na n'ugwu, ụdị mmadụ na ụdị bụ ihe dị oke mkpa maka ndị egwuregwu anyị. Nọgide na-agụ ma chọpụta nke kachasị mma maka gị !!